master ngasinye okungenani kanye ebhekene isidingo imishini ukhonkolo. Lokhu kuphakamisa imibuzo efana nokuthi uhlobo imishini kanye nobuchwepheshe salokhu kusebenza. Uma ungenalo iyanqo umsebenzi, umphumela kungaba inhlekelele.
Ukukhetha ithuluzi imishini ngokhonkolo
Uma ufuna ukwenza izimbobo imishini ukhonkolo, isiqalo kunconywa ukucacisa ithuluzi. Kulokhu, omunye amabili ongakhetha ingasetshenziswa njengendlela yokuqala lisebenza isando sokuprakthiza, njengoba yesibili - puncher. Isixazululo yokugcina yikona okungcono, ngoba into eyinhloko insimbi - ke isibhakela itshe noma ukhonkolo. Nale imishini kungenzeka ukuthola imigodi ubukhulu ngokwanele umxhwele, kuyilapho ngisho arcade isando sokuprakthiza ngeke ukwazi ukwenza izimbobo kokuba ububanzi mkhulu kuka-12 cm. Nokho, uma izosebenza nge foam ukhonkolo, kulesi simo-ke kuyadingeka ukuba ukhethe sokuprakthiza, kusukela puncher nje aphule udonga.
Uma une lokufeza izimbobo imishini ukhonkolo, ingasetshenziswa yini, akusiyo kuphela engenamsebenzi ngoba sokuprakthiza unstressed, kodwa futhi kungadala ukulimala ithuluzi. Uma une ukwenza nje izimbobo ambalwa, bese ngenxa yokuntula iyashaya ofanele futhi sokuprakthiza, kuyilapho uma lokhu kudingekile ukwakha sebuningini ukuvuleka, eziqashisayo noma ukuthengwa imishini ezifanele kuyodingeka. Kulokhu, akusiyo nje saving time nomzamo, mthetho kungenxa yokuthi amadivayisi yalolu hlobo ayakhelwe imithwalo okusezingeni eliphezulu, lapho nokuwubuwula handling imishini kungavela laphinde labhidlika. Uma kusadingeka zisebenzisa sokuprakthiza, kubalulekile ukusebenzisa pobeditovoe sokuprakthiza, senzelwe umsebenzi ukhonkolo. Ichopho kufanele ibe enamathela ngesimo Carbide sebethule.
Diamond sokuprakthiza ibhithi nezinye izesekeli
izimbobo Drilling e ukhonkolo kungaba kwenziwe nge akungenele ukuviliyela kokuzivikela annular ukuthi abe idayimane-camera phezulu. Ziklanyelwe ukuba asebenze Ngohlelo ne Rig imishini, okuyinto engenza izimbobo nge ububanzi ka 25 amasentimitha. Sicela uqaphele ukuthi lezi amadivayisi ngempela eqolo, ngakho ukuthenga kubo ukusetshenziswa ekhaya akwenzi mqondo.
Uma, ngesikhathi elungisa kufanele kwenziwe ukubeka esidayisa noma inkinobho, kufanele usebenzise umqhele, yakhelwe ukusebenza ngokhonkolo. On obungazungeza zokusebenza ubuso, futhi babe nokunamathisela ngomthofu, eyenziwe kanzima metal Alloys. ubukhulu yabo ziyahlukahluka kusuka kwangu-35 kuya kwezingu-120. Nokho imiqhele zisetshenziswa njalo kunazo, usayizi okuyinto ilingana 68 kwangu. Lokhu kungenxa yokuthi ububanzi kangangokuthi iyadingeka ukuze ukufakwa enethiwekhi.
Uma ufuna ukwenza izimbobo imishini ukhonkolo, usebenzisa umqhele, kufaneke ucishe imodi isiteleka Punch. Ngokuvamile, amadivayisi njenge labo abazokwazi ukwakha umgodi kabani ukujula -. Ayikho ezingaphezu kuka-15 cm Uma kukhona isidingo simbe odongeni ukujiya omkhulu, kungenzeka ukusebenzisa isandiso umlomo wombhobho. ibhithi enjalo ingase isetshenziselwe esihambisana sokuprakthiza. Ngokuphambene sangaphambilini anezele abanjalo sebethule Carbide-tungsten ingxubevange circumferentially. Inzuzo lapha wukuthi uma kukhona isidingo sokwenza imbobo ukhonkolo, okuyinto tile, ushintsho umlomo wombhobho akudingekile, ke uyokwazi sokuprakthiza kahle, hhayi kuphela ungqimba zokuhlobisa, kodwa futhi ukhonkolo. Ufuna bayamba izimbobo ukhonkolo, imishini yohlobo echazwe ingasetshenziswa imiqhele, kodwa sokuprakthiza ngesikhathi esifanayo akumelwe ube umthamo mkhulu kuka-1000 Watts.
Uma Punch etholakalayo ufuna ukuthi ukusebenzisa nge sokuprakthiza, ububanzi we yokugcina ziyahlukahluka kusuka kwangu-4 kuya kwezingu-80. Kaningi, imfundamakhwela master ngizibuza indlela ukukhetha lesifanele ubukhulu sokuprakthiza.
Ndawonye ngesando Kunconywa ukuthenga iqoqo sokuprakthiza ibhithi ngoba metal. Nokho, izingxenye eliphezulu ibiza kakhulu, ngakho-ke ubukhulu kufanele kube into efanayo we dowel, okuthiwa ozofakwa ke. Lapho uthenga ngalezi zikhathi zokuzivivinya Kunconywa bafuna ukuthola ukuthi ibaphi umsila kubo - SDS + noma SDS-max.
Izici imishini ukhonkolo
Uma unquma ukwenza izimbobo imishini e puncher ukhonkolo, okokuqala udinga ukuhlola ukuthi kukhona igobolondo e ukusilaphazeka. Uma betholakala khona, kubalulekile ukususa kubo ngendwangu, ngaphandle kwalokho emsebenzini angase abe nobunzima ezinye.
Ifaka kancane sokuprakthiza phakathi chuck, kufanele uqiniseke ukuthi isethiwe engela kwesokudla, kuyilapho shank igibele esitobhini. Inkinga enkulu ukuthi ngaphambi kokuthi uthole i imishini - Gubha ukushayisana komhlaba ukuqinisa metal. Ngokuvamile, lokhu kwenzeka lapho udinga wafohla udonga a ukujula. Kulokhu, valve kumele uphasiswe Punch, kuphela ke ungaqhubeka. Uma izimbobo zizokwenziwa esebenzisa sokuprakthiza isando, kuyasiza ukuba sibhekane ngokuphumelelayo umsebenzi sokuprakthiza for metal.
Lapho izimbobo Drilling e umqhele ukhonkolo senziwa, njalo ngemva kwemizuzu engu-15 bese kuyadingeka ukwenza ikhefu ngesikhathi esifanayo. Lokhu kungenxa yokuthi ithuluzi non-professional asakhelwanga umthwalo okuqhubekayo. Phakathi wathi isikhathi epholisa hhayi kuphela ithuluzi kodwa futhi izingxenye. Ngaphambi kokuqhubeka kukhona eminye, kubalulekile ukuba moisten ngamanzi sokuprakthiza, kuyoba izinsuku zayo.
Lapho kukhiqizwa izimbobo laser imishini ukhonkolo, kungaba uyaxebuka izigaba odongeni ngemuva. Kulokhu-ke kuyadingeka ukunciphisa ijubane ke inqubo izoke kancane. Naphezu kweqiniso lokuthi manipulation uyakususa isikhathi esiningi ngaphandle odongeni kuzohlala kunjalo.
Kama Automobile Plant, Chelny: umlando, imikhiqizo, izinkomba